Ukukhanya kwesibane, isibane sokukhanya, ukuKhanya kwetafile-ukukhanya kweHaus
I-Chandelier kunye nokuKhanya okuKhanyayo
UkuKhanya kwale mihla
Wamkelekile ku-Haus ukukhanyisa
I-Haus Lighting Limited ngumvelisi ophuhlisayo onamandla, onikezela ngesona sisombululo sokukhanyisa kwizakhiwo zorhwebo nezokuhlala.
Ukukhanyisa i-Haus limited ukhetho lwakho olukhuselekileyo.
Zonke izibane zipakishwe emva kokwenza uhlolo olupheleleyo kunye neemvavanyo ezinengxelo ecacileyo yeQC ukuqinisekisa isibane esinye somgangatho ophezulu.
Uhlobo lwethu lwemveliso luvela kuhlobo lwekhitshi ye-retro yezibane zangaphakathi zokuhombisa ukuya kwizitayile ezininzi ngokwendlela yoyilo lwefashoni kunye nokuthandwa, njengoyilo lwangoku kunye nokukhanya okukhanyayo kwe-LED, ikhandlela yekristale ekhazimlayo kunye nokukhanya kweprojekthi ngokwesiko ngokwemfuneko.
Iimveliso zokukhanyisa zisetyenziswa ngokubanzi kwiihotele ezahlukeneyo, amasebe, izindlu zokuhlala, kwaye iphumelele igama elihle kumgangatho ophezulu kunye nenkonzo elungileyo yexesha elide.
Iimveliso ezifanelekileyo kunye nezisebenzayo onokukhetha kuzo.
uhombiso lwesibane somgangatho HL60F04
Ukukhanya kweNdonga yokuKhanyisa kweHel60L04-4
Ukukhanya kwendlu yangoku yangoku HL60L03-3
Ukukhanya okuphezulu kokukhanya okuphezulu
Ikhonkco lejometri enamacala amathandathu
Igolide yegolide ejikelezileyo yokukhanyisa i-HL60L10
UkuKhanya okuKhanyayo okuKhanyayo kwe-HL60L09
Sizama ukuba liqabane lakho elithembekileyo lase China lokukhanyisa ishishini kunye noyilo oluhle lokukhanya, umgangatho ophezulu kunye nexabiso elifikelelekayo .Umgangatho kunye nexabiso ziyaqhubeka nokuba zezona ziphambili ekukhanyeni kweHaus!
I-Haus Lighting Limited ngumvelisi ophuhlisayo onamandla, onikezela ngesona sisombululo sokukhanyisa kwizakhiwo zorhwebo nezokuhlala. Sisekwe ngo-2013 ngesityalo somenzi esingaphezulu kwe-1500 yeemitha zesikwere kunye ne-200 yeemitha zeemitha zegumbi lokubonisa, ebekwe kwisixeko saseZhongshan esingumlando.
Sivelisa ikakhulu ukukhanya kokuhombisa okungaphakathi, kubandakanya ikhandlela, isibane sephepha, isibane, ilampu yesilingi, isibane sodonga, isibane setafile, isibane somgangatho kunye nokukhanya kweprojekthi ngokwezifiso ngezinto ezahlukeneyo onokukhetha kuzo, ezinje ngesinyithi, ialuminiyam, intsimbi engenasici, ubhedu, iglasi, marble kwaye ziyafumaneka ngakumbi.
Uyilo loTshintsha uBomi ngokuLula ngakumbi kwaye ndikuZisele into oyifunayo
Zenziwe njani ezo zibane zakudala?
Inombolo 4 ye-3 iFuqing Rd, iHenglan Idolophu, iZhongshan City, China
Umnxeba: +86 760 87687639